'वेदमा विज्ञान पनि छ र ज्ञान पनि' - Vishwa Hindu Parishad Nepal
Home foreign news 'वेदमा विज्ञान पनि छ र ज्ञान पनि'
'वेदमा विज्ञान पनि छ र ज्ञान पनि'
Rajaram Das 4:28 PM foreign, news,
राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघका सरसंघचालक डा. मोहन भागवतले भन्नु भयो कि भारतवर्षका सबै व्यक्तिको दैनिक जीवन वेदसँग सम्बन्धित छ। भेदको अर्थ थाहा पाउनु पर्छ। हामी जसलाई विज्ञान भन्छौं बाहिरका चीजहरू जान्नु हो। वेदमा विज्ञान र ज्ञानका साथै हामीले बुझ्न नसकेको कुरा पनि छ । धर्मले समाजलाई उच्च पार्छ, र धर्मको मूल वेद हो। अध्यात्मले विज्ञानको विरोध गर्न सक्दैन, किनकि अध्यात्ममा विज्ञान भन्दा बढी अनुभूति हुन्छ। हामीबिच आध्यात्मिकता र विज्ञान दुबै विचार पहिले देखि नै रही आएको छ। आध्यात्मिकता र विज्ञान वेदमा छन्, त्यसैले वेदको महत्त्व बढी छ। तीन गुणसँग सम्बन्धित सृष्टिको विचार वेदमा छ। माथिका विचारहरु डा. मोहन भागवतले नया दिल्ली स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर (बिड़ला मंदिर) मा विश्व हिन्दू परिषद र अशोक सिंघल फाउण्डेशन द्वारा आयोजित छ दिवसीय चतुर्वेद स्वाहाकार महायज्ञ कार्यक्रमको तेश्रो दिन सम्बोधनको क्रममा प्रकट गर्नु भएको थियो।
सरसंघचालकले भन्नु भयो कि आजको संसारमा उपलब्ध भौतिक ज्ञानलाई परिचालित गर्न आन्तरिक ज्ञान आवश्यक छ, जसको अभावमा युद्ध भइरहेको छ, विनाश र वातावरणको क्षति भइरहेको छ। उक्त ज्ञान प्रदान गर्ने मुख्य स्रोत वेदज्ञानलाई हामीले आफ्नै श्रम मार्फत पुनर्जीवित गर्नुपर्नेछ । वेदको पुर्नतेजस्वीकरण हिन्दुहरुको मात्र नभई, सम्पूर्ण मानव जातिको जीवनको प्रश्न हो, यो पूजा कर्मकांड सम्म सीमित कुरा मात्र होइन। वेदकोपुर्नतेजस्वीकरणसँगै सम्पूर्ण विश्वको कल्याणको हुनेछ र हामीले त्यसको लागि समर्पण गर्नुपर्नेछ।
अशोक सिंहल फाउण्डेशनका प्रमुख एवं महायज्ञका आयोजक श्री महेश भागचन्दकाले उक्त अवसरमा मंतव्य राख्दै भन्नु भयो कि माननीय अशोक सिंहल जीको अन्तिम चाहना थियो कि वेद घर-घरमा ढोका-ढोकासम्म पुर्‍याइनु पर्छ।
मानिसहरूले विश्व शान्तिको लागि वेद सुन्नु पर्छ। युवा पुस्तालाई वेदको बारेमा जानकारी गराउन दिल्लीमा विश्व स्तरीय चार वेद स्वाहाकार कार्यक्रम आयोजना गरिनु पर्छ । । २०१५ मा यस कार्यक्रमको योजना बनाइएको थियो तर कार्यक्रमको चार दिन अगाडि नै मा अशोक सिंघल ज्यू परलोक हुनु भयो र कार्यक्रम स्थगित गरिएको थियो । यस वर्ष चाडपर्व पछि, हामी यो कार्यक्रम गरिरहेका छौं र यसमा दक्षिण भारतका रामानुजाचार्य चिन्जय स्वामीजीको रेखदेखमा ६० आचार्यको चार वेद स्वाहाकार भैरहेको छ । यो स्वाहाकार ९ तारीखमा शुरू भएको छ र यो १४ तारीख मा बिहान पूर्णाहुति हुनेछ। यसमा समाजका सबै वर्गका मानिस, चाहे तिनीहरू राजनीतिमा छन्, सामाजिक, धार्मिक, सबै मानिसहरूलाई आमन्त्रित गरिएको छ। यसलाई सोशल मिडियामा पनि प्रमोट गरिएको छ ताकि धेरै भन्दा धेरै युवाहरूले भाग लिउन । आज सोशल मिडियामा जोडिएका एक लाख व्यक्तिले यो यज्ञ हेरिरहेका छन्।
गृहमन्त्री श्री अमित शाह र रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह पनि यसमा संलग्न थिए। सबै सन्तहरू यहाँ आउनु भएको छ र विदेशबाट सहभागीहरू यहाँ आउनु भएको छ ।
सत्रको शुरुमा विश्व हिन्दू परिषदको प्रबन्ध समिति सदस्य श्री दिनेश चन्द्रले भन्नु कि तीन दिनसम्म विभिन्न कुण्डमा चार वेदको जाप सस्वर मंत्रौच्चारण सहित यज्ञ कुंडमा आहुति राखिएको छ, त्यसैले यसलाई चार वेद स्वाहाकार महायज्ञ भनिएको छ । पूज्य अशोक सिंहल जीको संकल्प थियो कि वेद पुनः समाजमा फर्कनु पर्छ, वेदको ज्ञान सामान्य मानिसमा पुग्नुपर्दछ र बेलायतको अवधिमा वेदको बारेमा फैलिएका सबै भ्रमहरू हटाइनु पर्दछ।
साँझको सत्रमा, हरिद्वारका पूज्य सन्त रूपेन्द्रनाथ, दिल्लीबाट सुधन्शु जी महाराज महायज्ञमा आउनु भएको थियो । अतिथिको रुपमा डा सुब्रमण्यम स्वामी, श्री रामलाल, विहिप अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी अध्यक्ष श्री आलोक कुमारको उपस्थिति रहेको थियो।
By Rajaram Das at 4:28 PM